Ukuhlanganisa i-PA380 VC ngephakethe le-A350 lokuhlanganisa, kungenzeka?
Umbuzo Ukuhlanganisa i-PA380 VC ngephakethe le-A350 lokuhlanganisa, kungenzeka?
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #481 by JanneAir15
Sawubona! Ngilandile iphakethe le-A350 Merge futhi ngicabanga ukuthi i-A350 enhle kunazo zonke ongayitholela FSX njengamanje kodwa kunenkinga enkulu enkulu nayo: kusene-A320 / A330 efanayo ne-cockpit futhi ngacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi ihlanganiswe ne-VC kusuka ku-Project Airbus A380 kule ndiza. Yingakho i-A380 VC ngoba yiyona engiseduze kakhulu engingayithola (ngoba ayikho i-A350 VCs). Manje ungangisiza ngalokhu? Sivele sizame ezinye tutorials kodwa wangakwenza.
Nansi ukuhlanganiswa kwe-A350:
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #484 by Gh0stRider203
Ngenze ukucinga okusheshayo kwe-google njengoba ngithembekile ngingaze ngenze lokhu, futhi ngilethe nale vidiyo. Ngithemba ukuthi kuyasiza!
iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 7 izinyanga ezedlule #485 by JanneAir15
Ngivele ngibukele le vidiyo futhi ngizame izindlela kodwa ayizange isebenze. Yingakho ngicela lapha.
Yebo ngifinyelele esiphethweni sokuthi akunakwenzeka. Ngihlolile amafayela nakho konke okudingekayo kepha akunakwenzeka nakuba beyi-MDLXMDLH okuyinto ividiyo ithi kodwa ngihlolile konke futhi akekho osebenzayo ngakho angikwazi ngempela ukuthi ngenzeni. Kodwa uma othile engenza ukuthi isebenze ke sicela utshele lapha ukuthi.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-7 ezedlule JanneAir15.